ဒိုက်ဦး ဆရာမ က ကျောင်းသား ကို အညှိုးကြီး စွာ ရိုက်နှက် ဆုံးမ | Freedom News Group
by FNG on July 11, 2012	ပဲ ခူးတိုင်း ဒိုက်ဦးမြို့ နယ် အစိုးရအထက်တန် ကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားနေသည့် အဌမတန်း
From: ပြည်တွင်းသတင်း	← “ခင်ချာတူး ၏ အင်တာဗျူး”
ခောတ်မှီလာ တဲ့ ဖက်ရှင် ပွဲ များ →
ဒီလိုဆရာမတွေ ရှိနေတာ တိုင်းပြည် ကို ဘာမှကောင်းကျိုးပေးမှာ မဟုတ်ဘူး
July 29, 2012	zinyaw	#
July 22, 2012	ုkozinmintun	#
July 19, 2012	၀တီ	#
July 18, 2012	Htet San	#
အဲ့ဒီလို စိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့ ဆရာမမျိုးကို အလုပ်ကနေရာသက်ပန် ထုတ်သင့်တဲ့အပြင် ပညာရေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး
လုပ်စားပိုင့်ခွင့်ကိုပါ ထာဝရ ပိတ်သင့်ပါတယ်
July 18, 2012	ီဒေါ်အိဖြိုးကျော်	#
July 17, 2012	phyuthikhine	#
July 17, 2012	Cho Cho Win	#
ဆရာမရေ ခြေထောက်မှာရတဲ့ဒဏ်ရာက ဆေးလိမ်းတာနဲ့တင်ပျောက်တယ်နော်၊ ကလေးရဲ့စိတ်မှာရရှိသွားဒဏ်ရာကို ဘာဆေးနဲ့ကုပေးမှာလည်း၊ ဆရာမလုပ်နေပြီးတော့ ဒါတွေတောင်မသိတော့ဘူးလား၊ ဆရာမဆိုတာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေ အပြင် မိဘကအစလေးစားနေရတာ အတုယူနေရတာလေ၊ ဒါတောင်မှမစဉ်းစားတတ်ဘူးလား၊ ဒီအရွယ်တွေကဒီအတိုင်ဘဲဆိုတာကိုနားလည်ခွင့်လွတ် သင်ကြားပေးရမှာနားမလည်ဘူးလား၊ ဆုံးမရင်လည်းဘယ်လိုနည်းနဲ့နားဝင်အောင်၊ နားလည်အောင်ဆုံးမရမယ်ဆိုတာနားမလည်ဘူးလား၊ တုတ်နဲ့ရိုက်မှဆုံးမတယ်လို့ထင်နေလား၊ အဲဒီဆရာမကိုပြင်းပြင်ထန်ထန် အပြစ်ပေးသင့်ပါတယ်၊ ထောင်ချတဲ့အထိကိုအပြစ်ပေးသင့်တယ်၊ တခြားဆရာမတွေလည်းနောင်ကိုအဲ့ဒီလိုမလုပ်ရအောင် ပညာပေးအနေနဲ့အပြစ်ပေးသင့်ပါတယ်။
July 17, 2012	zayyarhtet	#
ထိုဆရာမအားပြင်းထန်စွာအရေးယူသင့်ပါသည်။ပညာရေးလောက အပြီးအပိုင်နုတ်ထွက်ခိုင်းသင့်ပါသည်။ဆရာစိတ်ဓါတ်မရှိသော ၊ညှာတာစိတ်မရှိသော ဆရာများအလိုမရှိပါ
July 16, 2012	sanlnphyo	#
ဆရာမ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်ချင်းတာတက်ဖို့ လိုဦးမှာပါ။
July 15, 2012	hnin	#
အလုပ်ဖြုတ်ပစ်ပါ့လား…သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းစာ စိတ်မှ မရှိတာ…မိုက်ရိုင်းတဲ့ဆရာမ
July 14, 2012	Tom A Tom	#
ူဒီလို လုမဆန်တဲ့ ဆရာ မကို လမ်းလယ် မှာ ခွေးနဲ့ အတူနေခိုင်းရမှာ အဲတာတောင်နေးသေးတယ် မဟုတ်လား?
July 14, 2012	Nyi Min Htet	#
တခါတည်းထောင်ချပစ်လိုက်ရမှာ အဲ့ ဆရာမကို အရေးမယူကြဘူးလား
July 14, 2012	minkaungkhant	#
ဒီလိုလူမဆန်တဲ့ ဆရာမတွေကို အလုပ်ဖြုတ်သင့်တယ်
ဆရာမဆိုတာ ကရုဏာတရားနဲ့ ပညာရည် နို့တိုက်ကျွေးနေတဲ့ မိဘပဲလေ
အဲဒီဆရာမကိုပြောလိုက်ပါ နောက်တစ်ခါအဲလိုဖြစ်ရင် ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရမယ်လို့ ဘယ့်နှယ့် သားသမီးချင်းမစာနာအပျိုကြီး လင်မရတဲ့ ဆရာမ နေမှာ ပညာရေးဝန်ကြီးကရော လက်ပိုက်ကြည့်နေနိုင်သလား
July 12, 2012	Wunthar Tun	#
နော်ဝေနိုင်ငံမှာသာ အဲဒီလိုရိုက်မိရင် အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ်ကျပြီး ဒဏ်ငွေ ခရိုနာ သိန်းချီးပြီး လျော်ကြေးပေးရပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကလေးကို နာကျင်စေမှုထက်ပိုဆိုးတဲ့ အရှက်ရစေမှုနဲ့တကွ စိတ်ခြောက်ခြားမှုကြောင့် ရေရှည်မှာ စိတ်ရောဂါဖြစ်တဲ့အထိ ဆိုးနိုင်တာမို့ ကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ ဥပဒေနဲ့ ပြဋ္ဌာန်းထားလို့ပါ။ ကိုယ့်သားသမီးကိုတောင် ရိုက်ဖို့မဆိုထားနဲ့ ခြိမ်းခြောက်ခွင့် ခြောက်လှန့်ခွင့်တောင် ပေးမထားပါဘူး။ ဒီနိုင်ငံမှာလောက် ဥပဒေမတင်းကြပ်စေချင်ပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာလည်း ကလေးတွေကို ရိုက်နှက်ဆုံးမတဲ့ဓလေ့ကို မိဘမဟုတ်သူများအနေနဲ့ ရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုပါပြီ။ မိဘဖြစ်နေသည့်တိုင် လိုအပ်လွန်းမှသာ ရိုက်သင့်ပါတယ်။ အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ရသူတွေမို့ မသိစိတ်မှာ စိမ့်ဝင်နေတဲ့နိုင်ထက်စီးနင်းစိတ်ဓာတ်တွေကို ဒီမိုကရေစီခေတ်အထိ ယူမလာမိအောင် အားလုံးသတိထားကျင့်ကြံကြဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိလို့ သြဇာအာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး မာနတက် မော်ကြွားတာမျိုးတွေလည်း ရှောင်သင့်ပါပြီ။ ဆရာဆိုတာ ကျောင်းသားတွေအတုယူထိုက်တဲ့ စံပြပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
July 12, 2012	Htoo Htoo Kyaw	#
Teachers should be heroes for students, or at least must avoid being antiheroes.
All of us have the innate human right to live with dignity.
We must fight corruptions.
The Government should ensure enough salary for the employees.
July 11, 2012	soe soe win	#
Pls , do something to stop the teacher’s violence. They have NO rights to do that . Give them lesson that never deal to torture the students once more . If they touch my kids , I’ll kill them . I swear .
July 11, 2012	myohtetaung	#
July 16, 2012	Comments are closed.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,506,143 hits
Hezbollah official Hassan Al-Laqees assassinated outside his Beirut home, says Hezbollah-run Al Manar television. 18 hours ago
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishUndergrads return to crumbling Myanmar universityUS seeks limited military ties with MyanmarSpecial Report: Thailand secretly supplies Myanmar refugees to trafficking ringsUS seeks greater Myanmar military trainingMyanmar looks abroad for investment in healthcareMyanmar still enlists boy soldiers despite reformsICRC trains surgeons in restive MyanmarMyanmar delegation visits Manipur to strengthen cultural tiesWant Burma info in your inbox each morning?